ပြည့်စုံ: August 2008
Pyae Sone | 4:52 AM | ကဗျာ
ဇနက္ကလို ပင်လယ်ကို လက်ပစ်ကူး
ခါးသီးမှုတွေ အမှောင်ထုထဲ ထားခဲ့ပါ….။
အမှန်တရားကို လတ်ဆတ်အောင် တည်ဆောက်ကြပါ…။
တို့တွေဟာ အနာဂတ်ရဲ့ ကြယ်စင်….
ဒုန်း ခနဲ တွန်းဖွင့်လိုက်ရင်
၀ုန်း ခနဲဆို ရွေ့လျားသွားမှာ…..။
အချိန် - 4:52 AM
Pyae Sone | 7:07 AM | Statement
အတုအယောင်အဖွဲ့အစည်းများရှိနေပါသဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်သတိထားသင့်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အချိန် - 7:07 AM
(၈)လေးလုံး အနှစ်(၂၀)ပြည့်အခမ်းအနား နို့ဖိုးစခန်းတွင်ကျင်းပ
Pyae Sone | 12:54 AM | News | သတင်း
(၈)လေးလုံး နှစ်(၂၀)ပြည့်အခမ်းအနားအား ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ နို့ဖိုးစခန်းအတွင်းရှိနေထိုင်ကြသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှ ဒုက္ခသည်များပူးပေါင်း၍ အမှတ်(၂)ရက်ကွက် ဓမ္မရက္ခိတရခိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ၈-၈-၂၀၀၈ ယနေ့ နံနက်(၈)နာရီ (၈)မိနစ်မှ (၁၁)နာရီအထိကျင်းပခဲ့ပြီး အခမ်းအနားတွင် လူဦးရေ (၄၀၀)ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အချိန် - 12:54 AM
Pyae Sone | 2:11 AM | ဆောင်းပါး
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအား `၈´လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးဖြင့် တိုက်ခဲ့၏။ မဆလသည် ရပ်၊ကျေးမှ နိုင်ငံတော်ကောင်စီအထိ အုပ်ချုပ်ရေးအား ချထားခဲ့၏။ တပ်အား လက်ကိုင်ဒုတ်တပ်အဖြစ် တည်ဆောက်၏။ ဖိနှိပ်ရေးယန္တရားများအား ချဲ့၏။ ဤသို့နှင့်(၂၆)နှစ်ကြာခဲ့သည်။ သဘောတရားအားဖောက်ပြန်သူတို့နှင့် တည်ဆောက်၏။ စစ်အေးအခင်းအကျင်းအတွင်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး `ရေစီး´တွင်ခေါင်းဖော်၍ မျောနိုင်ခဲ့၏။ သို့သော်…. ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်(၈)ရက်နေ့တွင်မူပြိုတော့၏။ နေ၀င်းနေ၀င်ချိန်….။ သြဂုတ်လသည်… မဆလ၏ နောက်ဆုံးနေ့များဖြစ်ခဲ့၏။
ယနေ့ကာလသည် `၈၈´နှင့်မတူ စစ်အုပ်စုအတွင်း ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေက ကျန်ဗိုလ်ချုပ်များအပေါ်မယုံ။ ရဲဘော်က အရာရှိကိုမယုံ…။ တပ်မတော်ကြည်းက တပ်မတော်လေကို မယုံ…။ ဤသို့နှင့် ဖြုတ်ထုတ် တက်အခြေအနေဖြစ်နေသည်။ တပ်တွင်းအကျိူးအစီးပွားကွာဟမှုက ကြီးမားလွန်းလှသည်။ ရဲဘော်တစ်ဦှးနှင့် ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်၏ ဘ၀အခြေအနေကား နှိုင်းယှဉ်၍ကိုမရ….။ ယခု… နေပြည်တော်တပ်က လက်ဇောင်းထက်လာသည်။ ပြည်သူအပေါ်နှင့် အခြားတပ်များအပေါ်တွင်…. ၎င်းတို့သည် ဗိုလ်သန်းရွှေ၏ လက်ကိုင်ဒုတ်တပ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းသစ်သည် နအဖအား စစ်အေးခေတ်က မဆလအားပေးခဲ့သည့် အခွင့်အရေးမျိုးပေးရန်မရှိ။ ၀ါဒသဘောတရားအရ ဆက်ဆံရေးမဟုတ် ၊ အကျိုးစီးပွားရေးအရ ဆက်ဆံနေကြသည်။ မနက်ဖြန် နအဖနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အကျိုးမရှိဆိုလျှင်၊ ဒီနေ့… ဆက်ဆံတော့မည်မဟုတ်… ရှင်းသည်။ အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုံးကလည်း တစထက် တစတက်တက်သွားသည်။ ဤသို့ အခြေအနေတွင် စစ်တပ်အတွက် အခွန်အကောက်တွေ ကောက်နေကြတယ်။ ပြည်သူတို့၏ ပန်းကန်ထဲမှ ထမင်းလုတ်အား စစ်တပ်မှလာ၍ လုနေပြီ။ ချမ်းသာသူလည်း မသက်သာ….။ ခံနေရတယ်…။ ပြည်သူတို့အဖို့ `ဆုတ်´ရန်နေရာမရှိတော့….။ စစ်အာဏာရှင်တို့အား ရှေ့တိုး၍ တိုက်ရန်သာ ရှိပါတော့သည်။
ထို့ကြောင့် …. `စစ်အုပ်စုအား ထိုးစစ် ထိုးရန်အချိန်ရောက်နေပြီ´
၈ လေးလုံး စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ကြ....
၈ လေးလုံး စိတ်ဓါတ် မွေးမြူကြ....
အချိန် - 2:11 AM
အာဇာနည်များမှ အာဇာနည်များသို့ သ၀ဏ်လွှာ
Pyae Sone | 2:04 AM | ကဗျာ
ငါတို့သည် ကြောက်ဒူးတုန်၍ ရောက်လာခြင်းမဟုတ်
သူရဲကောင်းများနှင့် အညတရ ရဲဘော်များ၏
စွန့်လွှတ်ခြင်းများကိုယ်သာ ငါတို့ ဂုဏ်ပြုချီးကျူး နေကြမည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့၏ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ်
ချစ်မြတ်နိုးသော စိတ်ဓါတ်သည် မည်သည့်အခါမှ
ရင်ခွင်ထဲတွင် အညတရ ရဲဘော်တစ်ဦး
သြော်… ကြီးမြတ်တော်မူသော် သူရဲကောင်းတို့
တသက်တွင် တခါသာရတောင့်ရခဲ သေခြင်းတရားကို
သင်တို့၏ မသေနိုင်သော ၀ိဥာဉ်များသည်
ငါတို့၏ နှလုံးသားထဲတွင် လည်းကောင်း
ခိုင်မာသော သစ္စာတရားဖြင့် ကတိပြုရင်း
`၈´လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းတွင် ရေးစပ်ခဲ့သော ကဗျာဖြစ်ပါသည်။ ကဗျာဆရာ၏ အမည်အား မဖော်ပြနိုင်သည့်အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။
အချိန် - 2:04 AM
သြဂုတ်လ အနီရောင် လှုပ်ရှားမှု
Pyae Sone | 2:00 AM | Statement
8888 - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: 8888
အချိန် - 2:00 AM
(၈)လေးလုံး အနှစ်(၂၀)ပြည့်အခမ်းအနား နို့ဖိုးစခန်းတွ...